Goolhaye Kepa oo Dhibaato wayn ka dhex abuuray Chelsea…(Xidigaha Kooxda oo Labo saf u kala jabay) – Gool FM
Goolhaye Kepa oo Dhibaato wayn ka dhex abuuray Chelsea…(Xidigaha Kooxda oo Labo saf u kala jabay)
Byare February 26, 2019
(London) 26 Feb 2019. Falkii Amar diidada ahaa uu sameeyay Kepa Finalkii Carabao Cup ay City Rigoorooyinka ku qaaday Manchester City ayaa dhibaato ka dhex abuuray Chelsea iyadoo ay labo saf u kala jabeen xididgaha kooxda.
Blues ayaa ku ganaaxday goolhayaha reer Spain mushaarka hal usbuuc, laacibka ayaana raali galin u diray kooxda, saaxiibadiisa iyo waliba taageerayaasha.
Yeelkeede, xiddigaha Chelsea ayaa la warinayaa inay ku kala qeyb sameyn falkii uu ku kacay Kepa oo qaar maa aad ugu careysan halka kuwa kalena ayba ku taageersan yihiin.
Warsidaha caanka ah ee Sportsmail ayaa fahansan in falkii amar diidada Kepa Arrizabalaga uu sababay kala qeybsanaan dhanka qolka dharbadelashada Chelsea.
Warsidaha ayaa sidoo kale fahansan in Goolhaye Caballero oo badel ku soo gali lahaa ciyaarta uu si gaar ah ugu careysan yahay Kepa maadaama uu u diiday fursadii uu garoonka ku soo gali lahaa isla markaana uu muujiyay isla sarreyn.
Laakiin waxaa la sheegayaa in ciyaartoyda qaar ay la safteen goolhaye Caballero iyo tababare Sarri halka kuwa kalena ay taageersan yihiin Kepa Arrizabalaga.
Maamulka sare ee Stamford Bridge ayaa iminka ka shaqeynaya sidii ay u damin lahaayeen khilaafka Sarri iyo Kepa iyagoona ka hor tagaya inuu dagaalkooda u soo shaac boxo sida kii Antonio Conte iyo Diego Costa ee 2017.
“Waxaan diyaar u nahay inaan ka gudubno imtixaanka labada kulan ee El Clásico” - Semedo
Neymar oo ku dhawaaday inuu Ooyo mar uu ka hadlayay Lionel Messi...!!!+SAWIRRO